Tsy hiadaladala no nahatongavako, fa fotsiny hividy voasary makirana · Global Voices teny Malagasy
Ny andavanandron'ny olona mihevi-tena ho vehivavy
MpanoratraLucía Jiménez Peñuela
Voadika ny 23 Jona 2022 12:25 GMT
Saripika nampiasàna ny lisansa CC0
Mety ho sarotra ny zavatra iainana andavanandro ho an'ireo una mujer diversa (mihevi-tena ho vehivavy), ary na ireo toerana fivarotana enta-madinika aza mety hivadika hanahirana. Toetsaina manapoizina no iainako, miainga avy amin'ny fijery ka hatramin'ny herisetra ara-batana. Ary dia mbola manontany tena foana aho hoe nahoana? Fa dia inona loatra ny ratsy nataoko no dia atao tahaka izao ny fitondra ahy?
Fitondrantena miverimberina hatrany hatrany izany, amin'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka, ireo mpiambina tranobe, na ireo tompona toerana fivarotana entana ilaina andavanandro.
Ohatra, izao no mitranga, saika isanandro mihitsy, rehefa mivoaka hividy voasary makirana aho. Miarahaba aho, saingy tsy mahazo valin'ilay arahaba; hatrany am-boalohany aho no efa miatrika fankahalàna. Ary raha mamaly ry zareo dia miteny fotsiny tahàka izao, “Inona no ilainao?” Raha ho ahy manokana, ny zavatra tadiaviko dia ny tsy hitondrana ahy amin'ny fomba feno fahasiahana. Ary ireo voasary makirana, mazava loatra.
Nisy fotoana, nihevitra aho fa tokony ho tahàka ny fitondra ireo vehivavy hafa tonga mankao amin'ilay toeram-pivarotana no tiako hitondràna ahy. Saingy avy eo, nieritreritra momba ireo antso fisarisariana zoro ataon'ireo tompona fivarotana amin'ireo vehivavy mpifanila aminy aho, sy ny fomba mahatezitra azy ireo rehefa tsy mitsiky na misary adala amin-dry zareo ireo vehivavy. Tsy mila izany ihany koa aho. Averiko indray: ny ho raisina am-panajàna fotsiny no tadiaviko.
Avy amin'izay niainako, afaka miteny aho hoe toy ny sangisangy mahatezitra azy ireo no fihevitry ny olona ny fomba fanehoako ny mahalahy na mahavavy ahy, ary dia efa mivonona aho araka izany ny hoheverina ho toy ny lehilahy. Tsy azo sorohana ireny herisetra kely madinidinika ireny, ka matetika, aleoko manao toy ny hoe tsy nisy na inona na inona nitranga. Noho izay antony izay ihany, sorohako ny tsy hametraka fanontaniana na manao fanehoankevitra mety hanome hirika an-dry zareo hamotsifotsy ahy ho toy ny lehilahy araka ny fitenin-dry zareo.
Araka izany, raha tokony aho hanontany raha manana voasary makirana ry zareo na tsia, satria fantatro fa ny mety ho avalin-dry zareo dia ny hoe “Eny/tsia ramose,” Aleoko miteny zavatra hafa toy ny hoe “Aiza no mety ahitako voasary makirana?” Satria averiko indray, ny ilaiko, dia ny hividy voasary makirana, fa tsy hanome ho an'ny tompon'ny toerana fivarotana ny hirika hahafahany manao ny fanambaràna maharikorikony momba izay fiainako.
Ary rehefa tonga ny fotoana handoavana vola, toy ny hoe fikarakaràna manokana izany no ataon-dry zareo ahy, raha tsaraina amin'ny hita misoritra eny amin'ny endrik'izy ireo, toy ny hoe nomeny ahy maimaimpoana ireo vosary makirana na hoe ho entiko handositra miaraka amiko. Na rehefa milahatra aho, ataon'ireo mpandray vola ho toy ny tsy misy aho ka ny olona aoriako no asainy mandroso. Araka izany, dia mitaraina ilay vehivavy ato anatiko: izaho no efa teto voalohany!
Efa azoko ihany koa ny hoe nafafy tany amiko ireo zavatra novidiako. Rehefa mitranga izany, ankoatry ny baràka afaka satria tsy maintsy aho mitsimpona ireo voasary makirana raraka amin'ny tany, dia manontany tena aho hoe fa maninona ry zareo no manao fomba fitondra tahaka izany amiko. Tonga ao an-tsaina ilay filaza hoe “toetran-dahy marefo”, ary dia miezaka aho ny mampihatra izay nianarako momba azy io amin'ilay toedraharaha.
Miresaka amin'ireo vehivavy hafa mandalo tetezamita aho ary dia hitanay fa zavatra mitovy no iainanay. Raisin'ireo lehilahy miahy anay ho toy ny sitraka izany, saingy misy zavatra lalina kokoa miafina ao. Tsapan-dry zareo fa manohintohina ilay ‘lehilahy’ ao anatin-dry zareo izahay. Heverin-dry zareo fa raha manana fifampikasohana amin'ireo vehivavy tahàka anay ry zareo, dia ho lasa ‘homo‘, ho lasa ‘pelaka’.
Ho azy ireo, ny teny hoe “homo” dia fiteny manjavozavo iray mampiseho ny tsy fahatakaran-dry zareo ny olona rehetra, lahy sy vavy, izay mitafy amin'ny fomba tsy ankasitrahan-dry zareo. Ho azy ireo, izahay dia tsy inona fa “pelaka misaron-tava”. Kanefa, toa tsy “pelaka” loatra no ahitan-dry zareo anay rehefa manendrikendrika anay ry zareo hoe vonona an-jambany hiara-mandry amin'izay lehilahy tonga avy any izahay.
Ilay fitantaràna hoe “Hajaiko ireo homo, saingy tsy mila mifandray amin'izy ireo aho” dia midika fa na inona na inona fifaneraseran'izy ireny aman'olona, izay mihataka amin'ny lasitra tsaratsaraim-poana misy azy ireny, dia adika ho toy ny mahataitra azy ireny ara-batana, ara-nofo. Raha manontany làlana amin'ny mpamily fiara fitateram-bahoaka izahay, lasa any amin'ny hoe miadaladala aminy no zavatra tsapany, ary dia toy ny hoe namely totohondry azy no fomba amaliany anao.
Tena voafetra loatra ny fahatakaran-dry zareo ny tontolo ka, voalohany, tsy miato kely ry zareo mba hihevitra fa tsy izy ireo no ivon'izao tontolo izao. Faharoa, ny olon-tsotra mahazatra dia toy mihevitra ireo mifanena aminy eny an-dalany eny hoe mety ho mpiaradia ara-nofo aminy. Ary fahatelo, tsy ny olona rehetra no mety ho tara amina lehilahy, ary ireo izay tara amina lehilahy dia tsy ho taraiky amin'izy rehetra.
Tiako ho hita hoe indray andro any aho mandeha any ananona any ary manaja ahy ilay mpiambina, tsy mijery ambony ambany ahy, manaja ny anarana nataoko hamantarana ahy, ary tsy hiantso ahy araka izay itiavany azy. Saingy ambonin'ny zavatra rehetra, tsy asiana fikasihan-tànana na famelezana ny fironana ara-nofoko.
Tiako ho hita ny andro izay tsy iantsoan'ny lehibeko ahy ho ao amin'ny biraony mba hanazavàny hoe manafintohina olona ny fomba fitafiko, fa kosa hanohanan-dry zareo ahy sy tsy handeferany ny fitondrantena tsy misy fanajàna manoloana ny fiainako. Ny andro izay hiantsoan-dry zareo ahy mba hiresaka fisondrotana eo amin'ny asa, fa tsy ny fitaovam-pananahako.
Antenaiko fa ho avy ny andro izay tsy ho toy izany intsony rehefa hividy voasary makirana aho, ary ny toerana fivarotana tsy ho lasa toerana iray hafa ao anatin'ny fiarahamonina handraisana ny olona araka izay afeniny any anaty zipony any. Tsy hoe filahiana na fivaviana misy tongotra mandehandeha daholo isika izay mandeha mividy voasary makirana: olombelona isika.
Amerika Avaratra 2 herinandro izay
Aostralia 10 Novambra 2016